Allgedo.com » 2012 » November » 18
Home » Archive Daily November 18th, 2012
Deg Deg: Qarax xoogan oo goordhow ka dhacay Xaafada Islii ee magaalada Nairobi
War hada nasoo gaaray ayaa sheegayo in qarax xoogan uu ka dhacay Wadad koowaad xaafada Islii ee Magalaada Nairobi. Qaraxaan ayaan la ogeyn Sababat rasmiga ah ee ka dambeysay iyo welib cida lala beegsaday. Goob jooge ku sugan wada koowaad ee Section 1 oo ah goobta uu qarax ka dhacay ayaa inoo xaqiijiyay in qaraxaasi uu dhacay. Ciidamo ka tirsan Amaanka ayaa goobta uu qaraxa ka dhacay soo gaaray,waxeeyna...
Qaar kamid ah Golaha Wasiirada oo xilalkoodii kala wareegaya Wasiiradii hore
Kadib markii ay Golihii Wasiiradii horre iyo kuwa cusb ay shalay yeesheen kulan isbarasho ah ayaa maanta waxaa magaalada muqdisho ka socto munaasabado ay xilalka kula wareegayaan Goliha Wasiirada Cusub ee Soomaaliya. Munaasabadahaani mid ka mid ah ayaa haatan ka socoto Xarunta wasaarada Warfaafinta Soomaaliya, tasoo ay xilalka kula kala wareegayaan wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya iyo wasiirka...
Mudanayaasha barlamaanka oo ka doodaya xeer-hoosaadka
Waxa Maanta lagu wadaa in ay Xarunta Golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho uu ka dhaco kulan ay lee yihiin Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya. Mudanayaasha barlamaanka ayaa ka doodaya arimaha xeer-hoosaadka sida uu sheegay gudoonka barlamaanka. Kulankaani ayaa la Filayaan in ay Maanta Ansixin doonaan Xildhibaanada Baarlamaanka, Waxaana In la soo gaba gabeynayo Maanta kulamada Xeerhoosaadka oo Maalmahaan...
Puntland oo gacanta ku dhigtay Markab si sharci daro kusoo galay xeebaha Soomaaliya
Ciidamada badda maamulka Puntland ayaa gacanta markab xamuul oo biyaha Soomaaliya sharci daro kusoo galay isla markaana ku daadinayay biyaha SOOMAALIA shamiito dhacday. Taliska Booliska maamulka Puntland ayaa sharaxaad ka bixiyay markab laga leeyahay dalka Waqooyiga Kuuriya kaasi oo maamulka sheegay inuu ku sugnaa xeebaha magaalada Boosaaso. Wuxuu sheegay in ciidamada ay soo qabteen xilli uu markabka...
Dowlada Somalia oo laga codsaday iney wax ka qabato dhibaato la sheegay in Maamulka Degmada Doolow uu u geysto dadka deegaanka “Sawiro”
Colonel Cabdullaahi Cabdi Maxamud (Alkey) oo ka tirsan Saraakiisha Maamulka u sameyneyso goballada Jubbooyinka, degana magaalada Doolow ee ka tirsan gobalka Gedo ayaa ka codsaday dowlada federalka Soomaaliya iney wax ka qabato dhibaato uu sheegay in maamulka ka jiro degmada Doolow Soomaaliya uu u geysto dadka deegaanka. Colonel Cabdullahi Alkey oo ka tirsanaa Saraakiishii Ciidamada Soomaaliya ayaa...